Sawirro: Safiirka USA oo 25 sano kadib magaalada Muqdisho yimid - Caasimada Online
Home Warar Sawirro: Safiirka USA oo 25 sano kadib magaalada Muqdisho yimid
Sawirro: Safiirka USA oo 25 sano kadib magaalada Muqdisho yimid
Muqdisho (Caasimada Online)-Dowlada Mareykanka ayaa shan iyo labaatan sano kadib maanta Safiirkeeda usoo dirtay magaalada Muqdisho, waxaana safiirka cusub uu kasoo dagay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho.
War saxaafadeedkasoo baxay xafiiska wasaarada arimaha dibada ayaa lagu sheegay in xukuumada Soomaaliya ay ku faraxsan tahay safiirka cusub ee Muqdisho yimid.
Danjire Stephen M. Schwartz waa Safiirkii ugu horeeyay ee Mareykan ah tan iyo 1991 ee loo soo magacaabo Soomaaliya. Magacaabistiisa waxa ay cadeyn u tahay xiriirka xoogan ee u dhaxeeya Soomaaliya iyo Mareykanka . sidoo kale waxa ay tilmaan cad u tahay in Soomaaliya ay u jiheysatay dhanka deganaanshaha iyo horumarka .